Relationship Archives - Page 23 of 54 - Lifestyle Myanmar
ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတယောက်ကိုလွမ်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲ။ အဲ့ဒီတစုံတယောက်နဲ့အတူမရှိနေချိန်မှာ ရင်ထဲဟာတာတာဖြစ်သလိုခံစားရတာကကောဘာကြောင့်များလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေရဲ့ဗီဇထဲမှာကိုက တကိုယ်တည်းနေတတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အများနဲ့စုဖွဲ့ပြီးနေထိုင်တတ်ခြင်းသဘာဝကပါလာပြီးသားမို့ပါ။ လူ့ရဲ့သဘောသဘာဝကိုကလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့အသားတကျရှိနှင့်ပြီးသားပဲလေ။ ဒီတော့ တခုခုကိုစွဲလမ်းမိပီဆိုတဲ့အခါ ပိုမိုတွယ်တာတတ်ကြတာပေါ့။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ကိုယ့်ထံရောက်လာခဲ့ပြီးမှ တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာသွားရချိန်မှာ ကြည်နူးစရာအချစ်တွေက ကြေကွဲစရာအလွမ်းတွေဖြစ်ကာ သတိရတမ်းတလို့မဆုံးဖြစ်နေရတော့တာပေါ့။ လွမ်းဆွတ်ခြင်းဆိုတာ long lasting relationshipမှာအဓိကကျတဲ့အချက်ပဲလေ။ နှလုံးသားထဲကကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူတူတွေ့ချင်နေချင်စိတ်တွေကပိုများလေလေ သတိရမှုတွေကလဲပိုတိုးလာလေလေပေါ့။ လူဆိုတာကလဲကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူပျော်အောင်ထားတဲ့သူတွေနဲ့သာပိုပြီးနီးနီး ကပ်ကပ်နေချင်ကြတာကိုး။ သိပ္ပံပညာရဲ့အဆိုအရ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ပူပန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဆီရိုတိုနင်(Serotonin)ဓာတ်တမျိုးနဲ့...
သင့်အပေါ် အပြည့်အဝနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ ဝိဉာဉ်ဖက်တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ခံစားရမယ့်အချက် ၅ ချက်
သင့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့special personလိုလူတယောက်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါသင့်ဘဝမှာလဲအထူးကျေနပ်ကြည်နုူးစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ့်လို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနားမှာသင့်အပေါ်အပြည့်အဝနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ အယူအဆသဘောထားတွေတူညီနေတဲ့လူတယောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုခုတင်ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလူကိုသင်နဲ့အတူတောက်ပမယ့်အလင်းတန်းလေးအဖြစ် ဒီအလင်းတန်းလေးကိုထွန်းညှိပေးမယ့်အကောင်းဆုံးမီးဆံလေးအဖြစ် လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင့်ဘဝရဲ့အံ့သြကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ခရီးလမ်းတိုင်းမှာသူနဲ့အတူတကွရှိနေပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့သင့်ရဲ့ဝိဉာဉ်ဖက်အတူတူပေါင်းစည်းသွားတဲ့အခါ ဒီဆက်နွယ်မှုလေးကတဆင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ရင်ခုန်စိတ်ကြည်နူးစရာအခိုက်အတန့်လေးတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ၁.အံ့သြမင်သက်မှူတွေစတင်ခြင်း သင့်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့စဉ်မှာ အံသြမင်သက်စရာကောင်းမှုတွေခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ ထူးခြားဆန်းပြားမှုတွေဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ။ သင့်ဘဝရဲ့ soul mateကိုတွေ့ရချိန်မှာ သင်ခံစားဖွင့်ဆိုမိတဲ့အချစ်အဓိပ္ပာယ်သစ်နဲ့အတူ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပြီး ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံကြိုက်လာတာကိုသင်သတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့သူ့ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်နွယ်မှုလေးဟာ သင့်ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတခုပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီအစိတ်အပိုင်းလေးကိုပြည့်ဝအောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့သင့်ဘဝရဲ့အခြားသောအစိတိအပိုင်းတွေကိုလဲအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။ ၂.မေးခွန်းတွေကိုအဖြေရှာပေးခြင်း သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေရှိတာဟာသင့်ပြဿနာရပ်တိုင်းရဲ့အဖြေကိုဖြေရှင်းရှာဖွေပေးဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။...
မနာလို သ၀န်တိုတတ်လွန်းတဲ့ လူ တစ်ယောက်နဲ့ ပက်သက်မိနေပြီလား
သင့်လူဟာ ခနခန အဆိုးမြင်အတွေးတွေနဲ့ ပြဿနာရှာတတ်သူလား။ သ၀န်တိုတတ်သူတစ်ဦးဆိုရင် သူပြမယ့် လက္ခဏာတွေကို သတိထားပြီး ထိန်းချုပ်ပေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်က အရာရာကို သ၀န်လိုက်တိုနေတတ်တဲ့ လူနဲ့ပက်သက်ရတာ အကျိုးမရှိပါဘူး။ အချိန်တွေကုန်ပါတယ်။ ကဲ အောက်ကဖော်ပြမယ့် အလေ့အထတွေရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ သူ့အစား တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲချစ်သင့်ပါတယ်။ သင်မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားရင် သူက စာမပို့၊ဖုန်းမခေါ်တော့တာမျိုးဟာ သူမကျေနပ်မှုကို ပြတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။...
သင့်exက သင့်ကို ချစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
လမ်းခွဲတယ်ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်မတို့တွေ ဆက်ဆံရေးကို ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ ဒါဟာ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မတို့ခံစားရတယ်။ ဒါဆို သင့်ချစ်သူကို ချစ်နေတုန်းပဲလား။ သင့်ရဲ့ အကြောင်းပြချက် ဘယ်လိုဘဲဖြစ်နေပါစေ၊ သင့်အနေနဲ့ သူ့ကို ချစ်နေဆဲလား ဒါမှမဟုတ် မချစ်တော့ဘူးလားဆိုတာ ၀ေခွဲမရဖြစ်နေတယ်။အဲ့သလိုပဲ သင့်ရဲ့ exက သင့်ကို ချစ်နေတုန်းပဲလား ဆိုတဲ့...
မိန်းမတွေက အချစ်နဲ့ပက်သက်ရင် သူတို့ အမျိုးသားတွေ လိုချင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတိုင်းကို လိုက်လျောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ အကန့်အသတ်နဲ့ ဘောင်တွေရှိတဲ့ အတွက် သူတို့ သည်းခံထားတဲ့ အရာတစ်ခုကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်လာပြီဆိုရင်တော့ သူဘယ်လောက်ချစ်ချစ် အဲ့ဒီယောကျ်ားဘေးကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မိန်းမတွေလုံး၀ စိတ်ပျက်သွားစေလောက်တဲ့ အမှားတွေကို စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေထပ်မလိုချင်သူ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ အချစ်ခရီးအတွက် ရိုလာကိုစတာ စီးသလို မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်။...
နှုတ်ကမပြောသည့်တိုင် သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်းတိုက်ရိုက်ပြသသည့် အပြုအမူခုနစ်ခု
အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်မှုကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြတတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုက“ မင်းကိုငါချစ်တယ်” လို့ပြောလေ့ရှိပြီး ယောက်ျားအများစုက သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ရပ်တွေမှာ သူတို့ချစ်ခြင်းရဲ့ နက်ရှိုင်းရင်းနှီးမှုတွေကို ပြသကြပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားက ယောက်ျားမိန်းမတို့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သင့်အတွက်သုတေသနပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည်သူ မပြောခဲ့သည့်တိုင် သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်းတိုက်ရိုက်ပြသသည့် အပြုအမူခုနစ်ခုစာရင်းကိုပြုစုထားပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်လုပ်သည့်အရာ၌သာရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်၊ “ မင်းကိုငါချစ်တယ်” လို့ပြောဖို့လွယ်ကူပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့အချစ်ဆိုတာလှုပ်ရှားမှုမှာပြသနေပါတယ်။ သင်သိလား? သင့်အတွက်...
အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတဲ့လူ ၉ မျိုး
Gallupကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တမ်းရလဒ်တွေအရ ၂၁ရာစုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ အထီးကျန်နေကြပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူတွေရှိနေတဲ့ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များကျယ်ပြန့်စွာရှိနေတဲ့ကြားကခုလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ။ ၂ခါ၃ခါ ချိန်းတွေ့ပြီးတာနဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ဘာကြောင့်ပြတ်တောက်သွားကြသလဲ။ ဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်လေ့လာခဲ့ပြီး ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်သောလူ အမျိုးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေ့သားလေး ညစာစားပြီးနောက် ကောင်လေးက ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ရန် သူ့အိမ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူ့မိဘများအိပ်နေသောကြောင့် ကောင်မလေးကို တိတ်တဆိတ်စကားပြောရန် တောင်းဆိုခြင်းခံရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။...
အိမ်ထောင်သက်တမ်းကြာလေလေ အချစ်တွေ ပိုခိုင်မြဲလေလေ ဖြစ်စေမဲ့ အပြုအမူ ၉မျိုး
များသောအားဖြင့် စတွေ့တုန်းက​တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရူးရူးမူးမူးချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ရိုးလာသလိုလို၊ ငြီးငွေ့လာသလိုလို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချစ်တွေက ဆိတ်သုဉ်းလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်တွေလျော့မသွားဘဲ ပိုပြီး ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုရှိလာအောင် အောက်ပါ အပြုအမူလေးတွေကို လိုက်နာကြည့်ရအောင်နော်။ ၁။ ညစာ အတူတူပြင်ဆင်ပါ။ ညစာအတွက် အတူတူချက်ပြုတ်ပြီး အတူတူစားသောက်ရတာ ညားခါစအိမ်ထောင်သည်တွေအတွက်တော့ အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ကအပြန် အတူတူစျေးဝင်ပြီး...
သင်လက်ထပ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ဆိုတာ ပြောပြနေတဲ့ လက္ခဏာ ၇ ရပ်
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ အလွန်လေးနက်သောကတိကဝတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွာရှင်းမှုနှုန်းဟာ အချိန်တိုင်းမြင့်မားနေသည့်အချိန်များတွင် မှန်ကန်သောဘဝပါတနာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တချို့တွေဟာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဟာ စိတ်ညစ်စရာကောင်းပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုသင့်ရဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရကျိုးနပ်တာကို သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သေသည်အထိ“ သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည်” ဟူသောကတိသစ္စာများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ နဲ့ ရှည်ကြာတဲ့ မိသားစုဘ၀တစ်ခုကို အဲ့ဒီယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်လက်တည်ဆောက်သင့်တယ်မသင့်ဘူးဆိုတာ အောက်က အချက်အလက်တွေမှာ ပြောပြထားပါတယ်။ သူဟာပြောဆိုဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းတယ် ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမဆို ဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်တာဟာ အဓိက ကျပါတယ်။ ထိရောက်သော၊...
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ချစ်ဖို့ ဘာကြောင့် ခက်ခဲနေခဲ့တာလဲ
နာကျင်မှု၀ေဒနာတွေ ၊ မကောင်းတဲ့ အတိတ်ကာလတွေနဲ့ relationshipတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရရင် နောက်တစ်ခါထပ်ချစ်ဖို့အတွက် အဲ့ဒီ့အရာတွေက ကိုယ့်အတွက်နံရံကြီးတစ်ခုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိတ်ထားမိတတ်ပါတယ်။ မင်းက သူတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချပြီး မင်းရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာအတွက် မျှော်လင့်ပြီး ဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့တွေက မင်းကို ဒဏ်ရာအနာတရတွေပဲ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ နာကျင်မှုကို နောက်တစ်ခေါက်မှာ သင်ကိုယ်တိုင် ရယူတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။...
Page 23 of 54 Prev 1 … 22 23 24 … 54 Next